Tusaalooyinka Shirkadda Tusaalooyinka Warbaahinta Bulshada | Martech Zone
Tusaalooyinka Shirkadda Tusaalooyinka Warbaahinta Bulshada
Sabti, Febraayo 7, 2015 Sabti, Noofembar 28, 2015 Douglas Karr
Intii aan ku guda jiray baaritaanka buugga, waxaan ku dhex dhacay macdanta yare ee dahabka yar Shift Communications PR bar blog… a Top 10 Tilmaamaha Warbaahinta Bulshada. Waxay halkaas dhigeen oo uma baahna sifo kasta oo loo isticmaalo ganacsiga.
Top 10 Tilmaamaha loogu talagalay Kaqeybgalka Warbaahinta Bulshada ee [Shirkadda]
Tilmaamahani waxay khuseeyaan shaqaalaha [Shirkadda] ama qandaraasleyaasha abuura ama wax ku biiriya baloogyada, wikis, shabakadaha bulshada, adduunyada dalwaddii, ama nooc kasta oo kale oo ah Baraha Bulshada. Haddii aad gasho Twitter, Yelp, Wikipedia, Facebook ama Google+, ama aad faallo ka bixiso baloogyada warbaahinta ee internetka, tilmaamahan adiga ayaa loogu talagalay.
In kasta oo dhammaan shaqaalaha [Shirkadda] lagu soo dhaweynayo kaqeybgalka Warbaahinta Bulshada, waxaan fileynaa in qof kasta oo ka qayb qaata faallooyinka khadka tooska ah uu fahmo oo raaco tilmaamahan fudud laakiin muhiimka ah. Shuruucdani waxay u muuqan karaan kuwo adag oo ay ku jiraan xoogaa hadal-maqal ah oo sharci-darro ah laakiin fadlan maskaxda ku hay in himiladeenna guud ay fududahay: inaan uga qaybgalno khadka tooska ah hab ixtiraam leh, oo khuseeya oo ilaalinaya sumcaddeenna oo dabcan raacaya warqadda iyo ruuxa sharciga .
Noqo mid hufan oo sheeg in aad ka shaqeyso [Shirkadda]. Daacadnimadaada ayaa lagu ogaan doonaa jawiga Warbaahinta Bulshada. Haddii aad wax ka qorayso [Shirkad] ama tartame, isticmaal magacaaga dhabta ah, caddee inaad u shaqayso [Shirkadda], isla markaana caddee doorkaaga. Haddii aad dano gaar ah ka leedahay waxa aad ka wada hadleyso, noqo qofka ugu horeeya ee sidaas leh.
Weligaa ha metelin naftaada ama [Shirkadda] qaab been ah ama marin habaabin ah. Hadallada oo dhami waa inay run ahaadaan oo aan marin habaabin; sheegashooyinka oo dhan waa in la caddeeyaa.
Soo dheji faallooyin macno leh, ixtiraam leh? si kale haddii loo dhigo, fadlan, ma jiraan wax spam ah iyo hadalo ka baxsan mowduuca ama meel ka dhac ah.
Adeegso caqliga saliimka ah iyo xushmadda guud: tusaale ahaan, waxaa ugu wanaagsan inaad weydiisato rukhsad si aad u daabacdo ama uga warbixiso wadahadallada loola jeedo inay ahaadaan kuwo gaar ah ama gudaha shirkadda [Shirkadda]. Hubso in dadaalkaaga si hufan uusan u jabin sirta [Shirkadda] asturnaanta, sirta, iyo tilmaamaha sharci ee hadalka ganacsiga dibadda.
Ku dhaji aaggaaga khibradda leh oo waxaad xor u tahay inaad siiso aragti gaar ah, shaqsiyeed dhaqdhaqaaqyada aan qarsoodiga ahayn ee [Shirkadda].
Markaad ku khilaafto ra'yiga dadka kale, ka dhig mid ku habboon oo edeb leh. Haddii aad isku aragtid xaalad khadka tooska ah oo umuuqata inay noqoneyso mid la isku diiddan yahay, ha u helin difaac aad u badan hana ka jeesan wadahadalka si lama filaan ah: si xor ah u weydiiso Agaasimaha PR talo iyo / ama inaad ku kala baxdo wadahadalka si edeb leh hab si fiican uga tarjumaya [Shirkadda].
Haddii aad rabto inaad wax ka qorto tartanka, hubi inaad udhaqmeyso si dublamaasiyadeed, xaqiiqooyinka toosna u hayso iyo inaad leedahay rukhsadaha kugu habboon.
Fadlan waligaa ha ka faalloonin wax kasta oo la xiriira arrimaha sharciga, dacwadda, ama dhinac kasta [Shirkadda] waxaa laga yaabaa inay dacwad ku socoto.
Marna ha ka qaybqaadan baraha bulshada marka mawduuca laga hadlayo loo qaadan karo xaalad qalalaase. Xitaa faallooyinka aan lagaraneyn waxaa laga yaabaa in lagu soo celiyo cinwaankaaga ama cinwaanka IP-gaaga. U dir dhammaan waxqabadka Warbaahinta Bulshada ee ku saabsan mowduucyada dhibaatooyinka PR iyo / ama Agaasimaha Arrimaha Sharciga.
Xariif ku noqo ilaalinta naftaada, arimahaaga gaarka ah, iyo macluumaadka qarsoodiga ah ee [Shirkadda]. Waxa aad daabacdo ayaa si ballaaran loo heli karaa waxayna jiri doonaan muddo dheer, markaa si taxaddar leh uga fiirso waxyaabaha ku jira. Google wuxuu leeyahay xusuus dheer.
Weydiimaha guud ee warbaahinta waa in loo gudbiyaa Agaasimaha Xiriirka Dadweynaha.
Tags: tilmaamaha shaqaalaha warbaahinta bulshadatilmaamaha warbaahinta bulshadaxeerarka warbaahinta bulshada
2015 Xaaladda Suuqgeynta Dijital ah
Feb 8, 2010 markay ahayd 5:15 PM
Drew wuxuu liis gareeyay liistada weyn ee siyaasadaha warbaahinta bulshada ee shirkadaha sidoo kale. http://bit.ly/bxKpbP